20 nashqadeyn calaamado leh farriimo qarsoon | Abuurista khadka tooska ah
Astaantu waxay leedahay adeegsiyo badan iyada lafteeda marka laga reebo inay tahay muuqaalka shirkadda ee shirkadda. Isaga naqshadeynta, midabada iyo qaababka ayaa tilmaamaya xoogga astaanta iyo ujeedooyinka adeegga ama alaabada aad bixiso.
Laakiin mararka qaarkood Astaamahan ayaa qarinaya fariin taas lama arki karo marka hore laakiin waa jirtaa. Wuxuu sidoo kale si xariifnimo leh ugu ciyaaraa fariimaha hoose ama qarsoon sida aad ku arki karto astaamaha soo socda. Mana aha inaynu soo qaadan doonno wax cusub laakiin qaar ka mid ah sida xaqiiqada ah waxay kula yaabi doonaan ujeeddooyinkooda.
7 Matxafka london
8 1 Formula
16 Beerta Pittsburgh
17 Orchestra Symphony London
18 Macaamiisha Gorgorka
Khadadka u ekaan kara qosolka ayaa tilmaamaya laga bilaabo 'A' ilaa 'Z' noocyada kala duwan ee alaabada dukaanka internetka laga iibiyo. Dhoolacaddeyntan ayaa sidoo kale tilmaamaysa sida ay macaamiisha ugu qanacsan yihiin adeeggaaga.
Halkan waxaa hubaal ah in fikrad yar aad ku ogaan doonto sida daabku wuxuu gooyaa 'G' iyo 'I' oo muujinaya sax ahaanta iyo jarista wanaagsan ee caleemaha Gillette.
'VA' ee kujira astaanta Sony VAIO waxay muujineysaa sida ay u egtahay calaamadda analogga, halka 'IO' wuxuu matalayaa lambarka 1 iyo 0 oo muujinaya calaamado dijitaal ah.
Nooca Toblerone wuxuu ku qariyaa wax aad u xiiso badan astaantiisa. Waa inaad ogaataa in shirkaddani ay ka timid Bern ee Switzerland, taas oo ah loo yaqaan 'Magaalada Bears' Hadda ma arki kartaa orsada ku qarsoon buurta?
Wejiga lagu arko astaanta LG waxaa laga sameeyay xarfaha astaanta. 'L' wuxuu muujinayaa sanka iyo 'G' waa qaabka wajiga.
Jaleecada hore kama arki doontid wax kujira astaantaan laakiin hadaan indhaheena diirada saarno 'C' iyo 'O' si lama filaan ah u muuqda sida maranku u abuuro gawaarida.
Astaanta Matxafka London, midabada ka dambeysa qoraalka waxay matalaan aagga juquraafi ahaan London iyo sida ay ugu ballaaratay taariikhda.
Tani waa mid aad u fudud, maaddaama booska cad ee u dhexeeya F iyo qaabka casaanka baraa lambarka 1 si gaar ah ee cayaarahaan isboortiga.
Calaamadda BMW waxay leedahay astaanteeda astaanta soo socota khadka Rapp Motorenwerke GmbH, shirkadda asalka ah. Caddaan iyo buluug waa midabada calanka Bavaria.
Meesha banaan ee ku taal bartamaha astaanta NBC abuur silhouette of a daawaha, iyo midabada waa baalasha. Tani waxay astaan ​​u tahay sida NBC ay ugu faanto waxa ay ku baahiso kanaalkooda caanka ah.
Carrefour waa goob isgoys ah oo ku taal Faransiiska, sidaas darteed labada fallaadhood waxaa ka mid ah midabada calanka Faransiiska. Meesha bannaan ee u dhexeysa fallaadhaha ku qarinaya "C" Carrefour.
Wareegga jaallaha ah ee 'Tour de France' calaamadee waxa uu yahay wheel wheel baaskiil, halka 'R' ee 'Dalxiis' loo sameeyay si loogu ekaado baaskiil.
Font loo adeegsaday labada 'Ts' ee 'Lafayette » foomka Taarta Eiffel.
Silsiladda jalaatada ee 'Baskin Robbins' waxay bixisaa noocyo kala duwan oo ah 31 dhadhan kala duwan nambarka 31na wuxuu ku soo baxaa xarfaha xarfaha 'B' iyo 'R'.
Roxy waa khadka dharka dumarka ee Quicksilver astaanta ayaa suuqan ku galeysa iyadoo la isticmaalayo qalbi. Astaanta dhexe waa midow laba astaamo oo lagu beddelay Quicksilver.
Waa astaan ​​xiise leh oo aan tusin kaliya gorilla iyo libaaxa is fiirinaya, laakiin xayawaanadan waxaa lagu abuuray iyadoo la adeegsanayo booska bannaan ee uu ka tegey geedka madow, iyo waa sidaad kalluunka hoosta ugu haysato.
Xarfaha astaantaan waxay muujinayaan kirishbooy.
Qaabka yaabka leh ee 'E' ee astaanta 'Eagle Consumables' ayaa leh macno badan markaan ogaanno isku ekaantooda qaab gorgor.
Dhagaha sameecadaha ayaa garaacaya waxayna astaanta muujineysaa 'B' iyo wareega cas oo loo taagay qaab sidaas ah waxay u egtahay qof xidhan headphones.
Labada 'Ts' ee astaanta Tostitos tilmaama laba qof iyo dheri suugo ah wuxuu bedelay barta 'I', taas oo ka dhigan lamaane wadaagaya tortillas-kooda caanka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » 20 farriimo qarsoon oo ku jira astaamaha shirkadda caanka ah
Dhammaan waxay ku fiican yihiin maqaalka illaa aan ka helno BMW. Horey ayey u cadaatay in muuqaalkaaga uusan ahayn kuwa hawada keena.
Waad ku mahadsantahay iskuxirka! Gelitaan sax ah
Iyadoo aan loo eegin waxa dadka BMW ay ka yiraahdaan astaantiisa… haddii dadku 80 sano ka soo fekerayeen wax soo saarayaal, iyadoo la ixtiraamayo, ma ahan kuwa iyagu wax kale oran kara ;-)
Jawaab jose enrique
Run badan @sese enrique !!!
Adiga: Waa maxay macnaha erayga subliminal?
shaashadda Iphone-ka dijo
Hagaag, waan jeclahay ogaanshaha waxyaalahan, waxay ku siinaysaa fikrado wanaagsan. Waad ku mahadsantahay boostada.
Jawaab ku bixi shaashadda iphone-ka la caddeeyey
@cable iphone wax cadeeyay !!!
Waxaan ka fikiray inaan helo fariimo ka baxsan aqoonteenna. Kuwa aan la ogaan. (Horudhac) si kastaba ha noqotee, badankood ma aysan garanaynin waxyaalaha .. Way fiicnayd :)
Ku jawaab Yubaldis
Dhaqammada la mamnuucay ee ku jira buugga aqoonsiga shirkadaha